အစ္စလာမ်မစ် ကိုင်ရို သည် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့ မြို့လယ်နေရာ၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်ပြီး တံတိုင်းကာရံထားသော မြို့တော်ဟောင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုင်ရိုရဲတိုက် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ပါဝင်ကာ ရာပေါင်းများစွာသော ဗလီများ၊ သင်္ချိုင်းဂူများ၊ မဒရာဆာ့ ဟုခေါ်သော ကျော ...
အဘူမီနာသည် ရှေးဟောင်း အီဂျစ် နှောင်းပိုင်းခေတ်တွင် မြို့တစ်မြို့၊ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကျောင်း အစုအဝေး နှင့် ခရစ်ယာန် ဘုရားဖူးတို့ လာရောက်ရာ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အလက်ဇန္ဒရီးယားမြို့ ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၂၈မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်း၏ အကြွင်းအကျန်များကိ ...
ဆန်တာမာရီယာ ဒဲလေ ဂရာဇီ ဘုရားကျောင်း (မီလန်)
ဆန်တာမာရီယာ ဒဲလေ ဂရာဇီ ဘုရားကျောင်းသည် သည် အီတလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မီလန်မြို့ ရှိ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဒိုမီနီကန် ကွန်ဗင့်ကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ကွန်ဗင့်ကျောင်း၏ ထမင်းစားခန်း နံရံတွင် လီယိုနာဒိုဒါ ...
ပွန်ပေ သည် မြေကြီးအောက်တွင် တစ်ဝက်တစ်ပျက် နစ်မြုပ်နေသာ ခေတ်ဟောင်း ရောမမြို့တော် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ် အီတလီနိုင်ငံ ကမ်ပါးနီးယားဒေသ အတွင်း နေပယ်လ်မြို့ အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ အေဒီ ၇၉ ခုနှစ်က ဗီဆူးဗီးယပ်မီးတောင် ပေါက်ကွဲရာမှ ပွန်ပေမြို့နှင့် ၎င်း၏ ညီ ...
ဖလောရင့် သမိုင်းဝင်ဌာနသည် အီတလီနိုင်ငံ ဖလောရင့်မြို့ကို ၄ပိုင်း ပိုင်းခြားထားသော လေးကွက်စိတ် အပိုင်း ၁ တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုလေးကွက်စိတ်အပိုင်းအား ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အီထရူစကန်တို့၏ အခြေချနေထိုင်ရာ နေ ...
ကာမိုနီကာ တောင်ကြား သို့ ဗယ်လ်ကာမိုနီကာရှိ ကျောက်ထွင်းပန်းချီများ သည် အီတလီနိုင်ငံ ဘရက်ရှာ ခရိုင်တွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ကျောက်ထွင်းပန်းချီများ အများဆုံး စုစည်းနေရာ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုစုစည်းမှုကို ယူနက်စကိုမှ ၁၉၇၉ ခုန ...
ဗာတီကန် တံတိုင်းပြင်ပရှိ စိန့်ပေါလ်၏ ဘာဆေးလီကာ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ဗာတီကန်တံတိုင်းပြင်ပရှိ စိန့်ပေါလ်၏ ဘာဆေးလီကာ အား ဗာတီကန်တံတိုင်းပြင်ပရှိ စိန့်ပေါလ် ဟု အများစု က ခေါ်ဆိုကြပြီး ရောမမြို့ရှိ ရှေးခေတ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ အဓိက ဘာဆေးလီကာ ၄ ခု တွင် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပြီး အခြား ၃ ခုမှာ လက်တီရန်ရှိ ...
မယ်ဒီချီ စံအိမ်များ သည် အီတလီနိုင်ငံ တပ်စ်ကေးနီပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော ကျေးလက် အဆောက်အဦးများ ဖြစ်ပြီး ၁၅ ရာစု နှင့် ၁၇ ရာစုကြားတွင် မယ်ဒီချီ မိသားစုဝင်များမှ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော အဆောက်အဦးများ ဖြစ်သည်။ ထိုစံအိမ်များအား မယ်ဒီချီ မိသားစု၏ ကျေးလက် နန်းတော ...
ဟိုးလီးဆီး၏ ပိုင်နက်များကို ၁၉၂၉ ခုနှစ် အီတလီဘုရင့်နိုင်ငံတော် နှင့် ချုပ်ဆိုသော လက်တီယန် စာချုပ် အရ အုပ်ချုပ်သည်။ အီတလီ၏ ပိုင်နက် အတွင်း ဖြစ်သော်လည်း အချို့နေရာများမှာ နိုင်ငံခြား သံရုံးများကဲ့သို့ပင် သံတမန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်များကို ရရှိခံစား ...
ဆမ်မာရာမြို့သည် အီရတ်နိုင်ငံရှိ မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆလာဒင် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအတွင်း တိုင်းဂရစ်မြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိကာ ဘဂ္ဂဒက်မြို့၏ မြောက်ဘက် ၇၈မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြို့တော်၏ ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေမှာ ၃၄၈,၇၀၀ ဦး ဖြစ်သည်။ ၂ ...
ချုံးဟ ဇန်ဘယ် သည် ရှေးခေတ် အီလမ် လူမျိုးတို့၏ အဆောက်အဦး အစုအဝေးဖြစ်ပြီး အီရန်နိုင်ငံ ခူးဇက်စတန် ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားခေတ်က တည်ဆောက်ခဲ့သော ဇစ်ဂါရက် အမျိုးအစား အဆောက်အဦး ဖြစ်ပြီး မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဒေသ၏ ပြင်ပတွင် ရှိသော ...
နာ့ခ်ရှီဂျာဟန်ရင်ပြင် သည် အီရန်နိုင်ငံ အစ်စ်ဖာဟန်မြို့ ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသော ရင်ပြင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၅၉၈ ခုနှစ် နှင့် ၁၆၂၉ ခုနှစ်ကြားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် အရေးပါသော သမိုင်းဝင် နေရာ တစ်ခု အဖြစ်လည်းကောင်း ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ...
ပါဆီပိုးလစ် သည် အာခီးမနစ် အင်ပိုင်ယာ ၏ ပွဲတော်ကျင်းပရာ မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အီရန်နိုင်ငံ ဖားစ်ပြည်နယ် ရှီရပ်ဇ်မြို့တော်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၆၀ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ပါဆီပိုလစ်ရှိ အစောဆုံး အကြွင်းအကျန်မှာ ဘီစီ ၅၁၅ ခုနှစ် မှ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ...
ကာကာဒူး အမျိုးသားဥယျာဉ် သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ်ရှိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဒါဝင်မြို့ ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၁၇၁ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုဥယျာဉ်သည် မြောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ် အယ်လီဂေတာ ရေးဗား ဒေသအတွင်း တည် ...
လော့ဒ်ဟိုးကျွန်း သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံကြားရှိ တက်စမန်ပင်လယ်တွင် ရှိနေသော လခြမ်းပုံစံ ခပ်ဆင်ဆင် မီးတောင်အကြွင်းအကျန် ကျွန်းဖြစ်သည်။ ကုန်းမကြီးရှိ ပေါ့တ် မက်ကာရီ၏ အရှေ့ဘက် ၃၇၀မိုင် အကွာတွင်လည်းကောင်း နော်ဖော့ကျွန်း၏ အနောက်တောင်ဘ ...
ဝေလန်ဒရာ ရေကန်ဒေသ သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ် အနောက်ဖျားတွင် တည်ရှိသော ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဝေလန်ဒရာရေကန် ဒေသသည် ဩစတြေးလျ ရှေးဦးနေ လူမျိုးစုများ ဖြစ်ကြသော မူသီမူသီလူမျိုး၊ နျမ်ပါးလူမျိုး၊ ဘားကင်ဂျီလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာ တွေ ...
ဆလမ်ဘာဂျာ လီမိတက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ရေနံတူးရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကော်ပိုရေးရှင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင် လုပ်ငန်း ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက်ဆပ် ပြည်နယ် ဟူစတန် မြို့တွင် အခြေပြုထားသည်။ ဆလမ်ဘာဂျာကို ၁၉၂၆ ခုန ...
အက်စ်-ကေ-တူး SK-II သည်ဂျပန် အလှကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀တွင်စတင်ခဲ့သည်။ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ Procter & Gamble ဖြစ်ပြီး အရှေ့အာရှ၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ ဥရောပ နှင့် ဩစတြေးလျတို့တွင် အထူးကောင်းမွန်သည့် အရေပြားထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းစနစ်များကို ...
မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ် ရေကာတာ သည် တရုတ်ပြည်၏ အရှည်ဆုံးမြစ် ယန်ဇီမြစ်ပေါ်ရှိ ဟူပေပြည်နယ် ဆန်းတုန်ဖိန်မြို့ အနီးတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ရေကာတာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၈၂၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ ...
ကူမင်းမြို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘာသာအားဖြင့် 昆明 ဟုရေးသားပြီး အသံထွက်မှာ ခွန်းမင် ဟုဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး နွေဦးရာသီကဲ့သို့ သမမျှတသောကြောင့် "Spring City" သို့မဟုတ် "City of Eternal Spring" ဟု တင်စ ...
ကွမ်ကျိုးမြို့ သည် တရုတ်ပြည် အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသရှိ ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ရုံးစိုက်ရာမြို့ဖြစ်၍ တတိယ အကြီးဆုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။ ကျူးကျန်းမြစ်ခေါ် ပုလဲမြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းပေါ်တါင် တည်ရှိ၍ ပင်လယ်မှ မိုင် ၈၀ ခန့်ကွာဝေးသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ယခင်က ကန်တုန်မ ...
ချန်ဆား is the capital city of Hunan, in south-central China, located on the lower reaches of Xiang river,abranch of the Yangtze River. Its municipality covers an area of 11.819 sq. kilometers and, according to the 2010 Census,apopulation of ...
ချုံကင်းမြို့သည် တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ဆီချွမ်ပြည်နယ် တွင် ရှိ၍ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ကပင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော မြို့ဟောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဘီစီ ၂၂ ရာစုနှစ်ခန့်က တရုတ် ပြည် ဆီယာမင်းဆက်မှ ယူဘုရင်၏ မိဖုရားကြီးမှာ ထိုဒေသ တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိ ...
တလျန်မြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ လျောင်းနင်ပြည်နယ်၏ဒုတိယအကြီးဆုံး မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ ရှန်းတုန်းကျွန်းဆွယ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် လျောင်တုန်းကျွန်းဆွယ်တွင် တည်ရှိပြီး ပေါဟိုင် ပင်လယ် ကမ်းခြေရှိ ဆိပ်ကမ်းမြို့ ကြီ ...
တာလီမြို့သည် ၈ ရာစုနှင့် ၉ ရာစုများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီး အေဒီ ၉၃၇-၁၂၅၃ခုနှစ်တွင် တည်ရှိခဲ့သော နန်ချောင်နိုင်ငံ မြန်မာအခေါ် နန်စော နိုင်ငံများ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပါသည်။ အေဒီ ၁၈၅၆- ၁၈၆၃ခုနှစ် ချင်မင်းဆက်လက်ထက်၌ ချင်မင်းဆက်ကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်််် ...
တုံးကွမ် သည် တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုံ ပြည်နယ်ရှိ မြို့ကြီးဖြစ်သည်။ ပုလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ရှိပြီး အရေးပါသော စက်မှုမြို့တော် ဖြစ်သည်။ နယ်နိမိတ်အဖြစ် မြောက်ဘက်တွင် ပြည်နယ်၏မြို့တော် ကွမ်ကျိုး ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဟွေ့ကျိုး ၊ တောင်ဘက်တွင် ရှင်းကျန်း နှ ...
ပေကျင်းမြို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရုံးစိုက်ရာ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် မြို့ပြကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဟိုအစိုးရမှ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်သည့် မြို့ကြီးလည်းဖြစ်သည်။ ပေကျင်းမြို့သည် တရုတ်သမိုင်းတွင် အရေးပါသည့် ရှေးဟေ ...
မန်စီ မြို့၏ အမည်ဟောင်းမှာ လူရှီ Luxi 潞西 ဖြစ်ပါသည်။ ခရိုင်အဆင့်မြို့ တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး တယ်ဟုန်းရှမ်းများနှင့်ဂျိန်းဖောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုရုံးစိုက်ပါသည်။ တရုတ်ပြည်အနောက်ဘက် ယူနန် ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မန်စီမြို့သည် ၂,၉၀၀.၉၁ km2က ...
ယန်တိုင်းမြို့အား ယခင်က ချီဖူးမြို့ဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရှန်းတုန်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပရီဖက်ချာအဆင့် မြို့တော် တစ်ခု ဖြစ်ကာ ဘိုဟိုင်းရေလက်ကြားပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကိုရီးယားပင်လယ်အော်၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိကာ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ချင် ...
ရွှေလီ ကို တရုတ်ဘာသာအားဖြင့် ဟုခေါ်ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တယ်ဟုန်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကောင်တီအဆင့်ရှိ မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မူဆယ်မြို့နှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပြုလုပ်သော နယ်ခြားမြို့ ဖြစ်သည်။ ဧရိယာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန် ...
ရှန်ဟိုင်းမြို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ သန်း ၂၀ အထက်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့မြို့ကြီး တစ်မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ရှန်ဟိုင်းမြို့သည် တရုတ်အရှေ့ ကမ်းရိုးတန်း ယန်ဇီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး ဗဟိုမှ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်သည့ ...
ရှောက်စန်းမြို့ သည် ဟူနန်ပြည်နယ်၊ ရှန်းထန်ခရိုင်ရှိ စီရင်စုအဆင့်ရှိမြို့ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သည့် မော်စီတုန်းမွေးဇာတိမြို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉တရုတ်ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကာလတွင် ရှောက်စန်းမြို့သည် အရေးပါသည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Sha ...
လာဆာမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဂီဖဲလ်တောင်ခြေရင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဒလိုင်းလားမား တိဘတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး အဆက်ဆက်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝူဟန်မြို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟူးပေပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဝူဟန်မြို့သည် ဟူးပေပြည်နယ်တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် လူဦးရေ အများဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၁ သန်းကျော် ရှိကာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် သတ္တမမြောက် လူဦးရေ အမျ ...
ဟန်ကောင်မြို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ဟူပေ့ပြည်နယ် အတွင်း ပင်လယ်ကမ်းခြေမှ မိုင် ၆ဝဝ အကွာတွင် တည်ရှိ၏။ ထိုမျှ ပင်လယ်နှင့် ဝေးကွာသော်လည်း အပြည်ပြည်မှ သင်္ဘော များသည် ရှန်ဟဲမြို့ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ယန်စီမြစ်တစ်လျှောက်တွင် ခုတ်မောင်းပြီးလျှင် ဟန်ကေ ...
ဟန်ကျိုးမြို့ သည် တရုတ်သမိုင်းတွင် ဇာတိ မာန်တက်စေသော ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြွယ်ဝ အချမ်းသာဆုံးသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်မှ မိုင် ၅ဝ ဝေးသောနေရာတွင် တည်ရှိ၍ ရှန်ဟဲမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၁၁ဝ ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိ သည်။ ၁၂ မို ...
ဟဲဖေးမြို့ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အန်းဟွေးပြည်နယ်၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ ပရီဖက်ချာအဆင့် မြို့တော်ဖြစ်ပြီး အန်းဟွေးပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အချက်အချာ ဌာန ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နမူနာယူထားသည့် လူဦးရေ ...
ဒါနန်မြို့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၏ တောင်ဘက်အခြမ်းတွင် တည်ရှိသော အဓိက ဆိပ်ကမ်းမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်၏ ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ဟန်မြစ်ဝတွင် တည်ရှိသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၏ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ပညာရေး အချက်အခြာမြ ...
ကပ်ပါဒိုရှာ သည် တူရကီနိုင်ငံ အနာတိုလီယာ အလယ်ပိုင်း အများအားဖြင့် နက်ဗ်ရှီယာပြည်နယ်၊ ကေဆာရီပြည်နယ်၊ ကာရှေးပြည်နယ်၊ အာဆာရာပြည်နယ်၊ မာလာတျာပြည်နယ်၊ ဆီဗာ့စ်ပြည်နယ် နှင့် နစ်ဒါပြည်နယ်တို့တွင် တည်ရှိသည်။ ဘီစီ ၃၀၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းမှ အစပြု၍ ကပ်ပါ ...
ဂိုရယ်မဲ အမျိုးသားဥယျာဉ် သည် တူရကီနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၁၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ မျှ ရှိပြီး နက်ဗ်ရှီဟာ ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဂိုရယ်မဲ အမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့် ကပ်ပါဒိုရှာ ကျော ...
ဒီဗရဂျိုင် မဟာဗလီနှင့် ဆေးရုံ
ဒီဗရဂျိုင် မဟာဗလီနှင့် ဆေးရုံ သည် တူရကီနိုင်ငံ ဆီးဗက်စ်ပြည်နယ်တွင်းရှိ အနာတိုးလီးယားဒေသ မြို့ငယ်တစ်မြို့ဖြစ်သော ဒီဗရဂျိုင်မြို့တွင် ဒေသခံ အုပ်ချုပ်သူမျိုးနွယ်စုတစ်ခု ဖြစ်သော မန်ဂူဂျဲကစ်ဒ် တို့မှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ တန်ဆာဆင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗလီနှင့် ...
အစ်စတန်ဘူလ်မြို့ကို သမိုင်းတွင် ဘိုင်ဇန်တီယန် နှင့် ကွန်စတန်တီနိုပယ်လ် ဟု သိရှိကြပြီး တူရကီနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၁၃.၁ သန်းရှိပြီး တူရကီလူဦးရေ၏ ၁၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိသည်။ အစ်စတန်ဘူလ်သည် မက်ဂါမြို့တော် တစ်ခုဖြစ်ရုံသာမက တူရကီ ...
အိုးလ်ဒ်စီးတီး ဟု ခေါ်ကြသော ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းသည် ၀.၃၅ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းသော တံတိုင်းခတ်ထားသော နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ် အစ္စရေးနိုင်ငံ ဂျေရုဆလင်မြို့ အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၈၆၀ ခုနှစ် ဂျူး ရပ်ကွက် မစ်ရှ်ကေးနော့ ရှာနာနင်းမ် ကို မတည်ထောင ...
ကလိုက်မြစ် သည် စကော့တလန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း လင်းနာ့ရှိုင်ယာနယ်ရှိ လောက်သား တောင်ကုန်း များမှ မြစ်ဖျားခံ၍ ကလိုက်ဇဒေး ချိုင့်ဝှမ်းဒေသကို ဖြတ်သန်း ပြီးလျှင် ကလိုက်မြစ်ဝကျယ်ထဲသို့ စီးဝင်လေသည်။ ကလိုက်ဇဒေးချိုင့်ဝှမ်း ဒေသတစ်လျှောက်တွင် ထရောက်ငါးဖမ်းခြင ...
ဩရိန်းပြည်နယ်သည် တောင်အာဖရိက ပြည်ထောင်စုတွင် ပါဝင်သောမူလ ပြည်နယ်တစ်နယ်ဖြစ်၍ ဩရိန်းဖရီးစတိတ်ပြည်နယ်ဟု ခေါ်တွင်လေသည်။ မြောက်ဘက် တွင် ထရန်စဗား ပြည်နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် နာတဲပြည်နယ်နှင့် လီဆိုသိုနိုင်ငံ တောင်ဘက် နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဂွတ်ဒဟုပ်အငူပြည်နယ်တို ...
ဆီယမ်ရိမြို့ သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ဆီယမ်ရိပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဆီယမ်ရိရှိ ပြင်သစ်ရပ်ကွက်ဟောင်း နှင့် ဈေးဟောင်းတဝိုက်တို့တွင် ကိုလိုနီခေတ် ဗိသုကာ လက်ရာ များနှင့် တရုတ်စတိုင်လ် ဗိသုကာ လက်ရာများ ရှိသည်။ မြို့တော်အတွင်းတ ...
ဖနွမ်းပင်မြို့သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ မဲခေါင်မြစ်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ပြင်သစ်တို့၏ ကိုလိုနီနယ် အဖြစ် ရှိနေစဉ်ကတည်းက မြို့တော်အဖြစ် ရှိနေခဲ့သည်။ ဆီယမ်ရိမြို့၊ ဆီယက်နွတ်ဗေးလ် တို့နှင့် ...
ကရဗီမြို့ သည် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း ကရဗီခရိုင်၏ အဓိကမြို့ ဖြစ်ပြီး ဖန်ငပင်လယ်အော်အတွင်း စီးဝင်သော ကရဗီမြစ်ဝတွင် တည်ရှိသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၅၂,၈၆၇ ဦး ရှိသည်။ ကရဗီခရိုင် နှင့် ကရဗီဒိစတြိတ် ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှ ...
ကော့စမွီကျွန်း သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း အလွန်ရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်း ဖြစ်သည်။ ပထဝီဝင်အားဖြင့် ချွမ်ဖုံကျွန်းစုတွင် တည်ရှိပြီး ဆူရတ်ဌာနီပြည်နယ်တွင် ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကော့စမွီ အား စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ် အဆင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခ ...
ကော့တောင်ကျွန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံပိုင် ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်ပြီး ချွမ်ဖိုကျွန်းစု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့၏ အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်းအကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၂၁ကီလိုမီတာ ရှိသည်။ ဆူရတ်ဌာနီပြည်နယ် အမ်းဖိုးကော့ပငန်း၏ ခရိုင် ...
နှစ်(၈၀) မွေးနေ့ အားကစားကွင်း
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး အခ ..
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ ..
ဓားရေး ၃၇ ချင်း
လက်ပံတန်း ပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင ..
၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးပေါ်အခြေအနေ ထု ..
အမျိုးသား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံ ..
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု တပ်ဖွဲ့၊ ..
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတပ်ဖွဲ့၊ ..
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး အရာရှိချု ..